हालान्ड माथि रियल म्याड्रिडको नजर ! - Bigul News
हालान्ड माथि रियल म्याड्रिडको नजर !
रियल ला लिगाको दोस्रो स्थानमा छ । रियल बार्सिलोनासँग २ अंकले पछि परेको छ । विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व खेलकुद नै ठप्प छ । रियल च्याम्पियन्स लिगको प्रि–क्वाटरफाइनलमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्ट सिटीसँग २–१ ले पछि परेको छ ।
प्रकाशित : बुधबार, चैत १२, २०७६०२:०९